SAWIRRO: kulan ku saabsan Faafinta iyo Wacyigelinta Xeerka Biyaha KG oo ka dhacey Baydhabo. | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	SAWIRRO: kulan ku saabsan Faafinta iyo Wacyigelinta Xeerka Biyaha KG oo ka dhacey Baydhabo.
SAWIRRO: kulan ku saabsan Faafinta iyo Wacyigelinta Xeerka Biyaha KG oo ka dhacey Baydhabo.
written by Siid Cali 23/06/2022
Kulankaan ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiirka wasaaradda Tamarta Kg, qaar kamid ah agaasimiyaasha wasaaradaha Kg, gudoomiyaha guddiga Barkacyaasha iyo qoxootiga KG, maamulada gobolka baay iyo midka Degmada Baydhabo iyo hay’adaha taageera barnaamijkaani.
Barnaamijkaan ku saabsanaa Faafinta iyo Wacyigelinta Xeerka Biyaha KG ayaa waxaa si wada jir ah u filinayaan wasaaradda Tamarta DF, KG World Bank Group iyo Biyoole, waxaana laga wadaa guud ahaan gobolada dalka.
Agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha kg Mudane Jeylaani Cabdulaahi Xaaji ayaa sharxey mashruucaan iyo sida ay muhiim ugu yihiin degaanada KG.
Gudoomiyaha Gobolka Baay Cabdifitaax Maxamed Ibraahim ayaa ayaa soo dhaweeyey, asigoona sheegey hadii baarlamaanka Kg iyo madaxweynaha ay soo wada mareen ayaa wuxuu ku booriyey in uu sharcigaani dhaxal gal uu noqdo.
Wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha Kg Cabdulaahi Isaaq Macalin “ Cabdulaahi Ganey” oo furey shirka ayaa wuxuu u mahadceliyey hay’adaha, samafalada, arimaha bulshada iyo shirkadaha biyaha asigoona dhinaca kale uu tilmaamey in barnaamijkaani sidoo kale laga fulinaayey gobolada kale ee Bakool iyo Sh\_ hoose.
SAWIRRO: kulan ku saabsan Faafinta iyo Wacyigelinta Xeerka Biyaha KG oo ka dhacey Baydhabo. was last modified: June 23rd, 2022 by Siid Cali
Guddoomiyaha Golaha shacabka oo saraakiisha amniga la qaatay kulan looga hadlayo sugidda amniga ee Todobaadka Xorriyadda.
Mareykanka Iyo Midowga Yurub Oo Cunaqabatayn Dheeraad Kusoo Rogaya Ruushka
Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Cudurka Covid 19 Dalka Soomaaliya